March 31, 2010 at 11:53 at the
Hi, waxaan isticmaaleynaa plugin ku saabsan goobta iyo aad ugu faraxsanahay natiijada ka yihiin. Si kastaba ha ahaatee waxaan jeclaan lahaa in kooxda martida siinno fursad ay ku turjumi basaasa goobta luqad Scotland oo waxay la yaabeen haddii ay macquul tahay iyo waxa ku adag ee ku daray afka dheeraad ah?
Kasta oo caawimo /-celinta waxaa ugu mahadnaqayo. Thanks for the great plugin 🙂
Waxaad u baahan tahay oo keliya in aad ku darto line hal inay la dagaallamaan luqadaha ee faylka geysid, nasiib wacan
Waad ku mahadsan tahay info oo ka xumahay reply marxuumkii.
Waan ku siin doonaa go a oo aynu aad ogtahay sida aan ku helay. Thanks mar, still an excellent plugin 😉
Very good 🙂 One more function, Waxaad ku dari kartaa galay horyaal, identifers qaar ka mid ah luqadaha… i siinin wax og… sababtoo ah in google webmastertools muujinaya fariin this:
Tags horyaalka oo maqan 0
Horyaalka tags Akownnada 1,139
Tags horyaalka Long 0
Tags horyaalka Gaaban 0
Tags horyaalka Non-wargelineed 0
Horyaalka tags nuqul waa dhibaato yar, but problem 🙂
Maamulaha jawaabi karaa si aan comment? 🙂
Title tags iyo tags Meta ayaa sidoo kale lagu tarjumay, ma inkastoo leeyihiin interface frontend ah, tani waxaa la shaqeeyeen. Waayo, hadda – hab degdeg ah u heli karto go'an tahay in la saaray qoraalka waxaad isticmaali ee horyaal ah meel kasta oo post a (xataa mid gaar ah) oo ha engine turjumidda hagaajin this.
Wax walba waxa ka shaqeeya wanaagsan version ugu dambeeyey (v.5).
Waxaan soo jeedin kartaa turjumaan u Urdu iyo Punjabi ? Waxaan leeyahay soo jawaabay in Pakistan oo ay ka codsaday kuwa. Inta badan ee Pakistan iyo sidoo kale qaar ka mid ah Hindiya hadlo, kuwaas oo laba luuqadood.
Thanks; keep it up hawsha wanaagsan ee!